I-Xfdesktop 4.15 ilapha futhi lezi yizindaba zayo nezinguquko | Kusuka kuLinux
I-Xfdesktop 4.15 ilapha futhi lezi yizindaba zayo nezinguquko
Okuhle | | Aplicaciones
Kusanda kwethulwa ukukhishwa kwenguqulo entsha yesiphathi sedeskithophu xfdesktop 4.15.0 esetshenziswa ngaphakathi kwemvelo yomsebenzisi weXfce ukunikeza izithonjana kwideskithophu nokwenza ngezifiso izithombe zangemuva.
Futhi, Abathuthukisi be-XFCE nabo bakhiphe ngasikhathi sinye ikhulula inguqulo entsha yemenenja yefayela IThunar 4.15.0, okuthuthuka kwayo kugxile ekuqinisekiseni isivinini esikhulu nokuphendula, kuhlanganiswe nokunikeza okusebenziseka kalula.
Ngaphambi kokwazi ushintsho kuzinguqulo ezintsha, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi izinhlobo ezingajwayelekile ngaphakathi komsebenzi owenziwe ngaphakathi kwephrojekthi ye-XFCE yizinhlobo ezithathwa njengezinguqulo "zokuhlola" ezikhishwa ukuze zipholishe futhi zithole izimbungulu nemininingwane ngaphambi kokukhishwa "kwenguqulo ezinzile" ehlala ingu "even".
1 Yini okusha ku-xfdesktop 4.15?
2 Yini okusha eThunar 4.15.0?
Yini okusha ku-xfdesktop 4.15?
Kuzinguquko ku-xfdesktop 4.15, kuyakhulunywa kusimemezelo sokuthi ezinye izithonjana ziyabuyekezwa, usayizi wesithonjana ubuncane wenyukele ku-16.
Ngaphandle kwalokho ushintsho kusuka ku-exo-csource kuya ku-xdt-csource kwenziwa, ukuqinisekisa ukuthi konke okukhethiwe kuyasuswa ngemuva kokuchofoza okukodwa.
Olunye ushintsho olugqamile yilolo ungeze i-hotkey yeShift + Ctrl + N ukudala izinkomba. Bheka izithonjana njengoba uthayipha, kanye nokulungisa izimbungulu nokulungisa ukuvuza kwenkumbulo, nakho kungeziwe. Ukuhumusha okubuyekeziwe, kufaka phakathi isiRashiya, isiBelarusian, isi-Ukraine, isiKazakh nesi-Uzbek.
Yini okusha eThunar 4.15.0?
Ngokuqondene nezindaba nezinguquko ezethulwe enguqulweni entsha yale mphathi wefayela, yilezo Izinombolo zenguqulo zishintshiwe Okwamanje umphathi wefayela leThunar njengoba izinhlobo manje seziqanjwe ngokufana nezinye izinto zeXfce (ngemuva kuka-1.8.15, 4.15.0 kwenziwa ngokushesha). Uma kuqhathaniswa negatsha le-1.8.x, inguqulo entsha isebenza ukuzinzisa nokucwenga ukusebenza.
Ngaphezu kwalokho, phakathi kokuthuthuka okuphawulekayo kwale nguqulo entsha, singakuthola lokho ikhono lokusebenzisa okuguquguqukayo kwemvelo lasetshenziswa (isibonelo, $ HOME) kubha yekheli.
Kungezwe inketho yokuqamba kabusha ifayili elikopishiwe uma kwenzeka impambana nomgwaqo enegama lefayela elikhona.
Ama-elementi "Hlunga nge" no "Buka njengo" asusiwe kusuka kumenyu yokuqukethwe. Onke amamenyu wokuqukethwe ahlanganiswe abe yiphakheji eyodwa.
I- ukufihla amadivayisi we-Android eqenjini lamadivayisi wenethiwekhi, ngaphezu kweqembu «inethiwekhi» idluliselwe ezansi.
Ikhodi yemephu yendlela yefayela efakwe ngamamaski manje ayisazweli;
Kwezinye izinguquko ezigqamile esikhangisweni:
Inkinobho eyengeziwe yokumisa okwesikhashana ukuhambisa noma ukukopisha ukusebenza.
Kwehliswe i-GtkActionEntry kufakwe i-XfceGtkActionEntry.
Kumodi yokubonisa isithonjana, ikhono lokukhohlisa amafayela ngokuhudula bese uphonsa.
Usayizi omile webhokisi onolwazi lwethempulethi wehlisiwe.
Omaka abasha bangeziwe ekugcineni kohlu lwemizila ejwayelekile.
Kungezwe izenzo zedeskithophu (izenzo zedeskithophu) lwemibhalo yasekhaya, isifinyezo sesistimu (ikhompyutha: ///), nokusebenzisa kabusha umgqomo.
Lapho umuthi wefayela uboniswa, ukuvezwa kwezimpande kuyama.
Kungezwe ibhokisi lokuvala amathebhu ahlukahlukene ngokususelwa ku-libxfce4ui.
Kungezwe ibhokisi lokuqinisekisa uma kwenzeka kwenziwa umzamo wokuvala iwindi ngamathebhu amaningi.
Isithonjana esingokomfanekiso sengeziwe ekusebenzeni kokususwa kwedivayisi.
Idizayini ethuthukisiwe yethebhu yamalungelo wokufinyelela;
Kungezwe izilungiselelo ukunika amandla nokukhubaza ozimele bezithonjana.
Ukufaka phakathi kwamawijethi ezingxoxweni ezinezilungiselelo kuthuthukisiwe.
Ekugcineni, uma ufuna ukwazi kabanzi ngezimemezelo zalezi zinguqulo ezintsha, ungabonisana nabo ngokuya kulezi zixhumanisi ezilandelayo.
Isimemezelo se-Xfdesktop 4.15.0
Isimemezelo seThunar 4.15.0
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Xfdesktop 4.15 ilapha futhi lezi yizindaba zayo nezinguquko
Uhlobo olusha lweFree Pascal 3.2.0 lufika futhi lezi yizinguquko zalo
I-RPi-VK-Drive: isilawuli se-GPU esisekela i-Vulkan samabhodi we-RPI amadala